Fomba voaporofo fa mahasoa ny orinasanao madinidinika amin'ny Marketing Media Sosialy | Martech Zone
Fomba voaporofo fa mahasoa ny orinasanao madinidinika amin'ny Marketing amin'ny Media sosialy
Alakamisy, Jona 11, 2015 Alakamisy, Jona 11, 2015 Douglas Karr
Ho gaga ianao fa, aorian'ny fandalinana tranga sy porofo rehetra, dia mbola misy mpanafika any amin'ny tontolon'ny orinasa kely mino fa fandaniam-potoana fotsiny ny media sosialy. Aza diso hevitra aho… mety handany fotoana fotsiny izany. Raha mandany ny fotoanao amin'ny fijerena sy fandefasana horonantsary saka ianao dia mety tsy hahazo asa be loatra.
Azoko antoka fa rehefa nahazo telefaona finday ireo orinasa voalohany, manahy ireo mpitarika fa hiara-hiresaka amin'ny namany mandritra ny andro ihany koa ireo mpiasa. Fa ankehitriny tsy misy miahiahy ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fahazoana mifandray amin'ny orinasa amin'ny telefaona - na ivelany na anatiny. Tsy misy maha samy hafa azy ny media sosialy… fampahalalam-baovao izy io ary miankina amin'ny paikady ampiasain'ny orinasanao hametrahana azy.
Raha miditra vondrona ianao, mizara lohahevitra misy lanja, mampifandray sy manaraka ny influencers, manampy ny olona manana olana, mampiroborobo ny atin'ny tena manokana anao, manaova curate ary mizara atiny lehibe avy amin'ny hafa, dia afaka mampitombo tambajotra mahafinaritra afaka manome fidiram-bola an-taonany maro ianao.
Ny olana dia tsy miankina amin'ny fisian'ny media sosialy fa ny fomba fampiasan'ireo orinasa ireo ny media sosialy hampiasaina tsara. Raha ny fahitana azy kely amin'ny asa aman-draharaha, ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia mihoatra ny fahazoana fotsiny ny fitiavana, ny mpankafy, ny repins ary ny retweet, fa kosa ny fahazoana ireto tombony ambony manaraka ireto, ary bebe kokoa, izay hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasa. Jomer Gregorio, Marketing amin'ny dizitaly CJG.
Fomba 8 ahazoana tombony amin'ny fandraharahana madinidinika ny haino aman-jery sosialy
Fampitomboana ny fivezivezena amin'ny tranokala.
Miteraka fitarihana amin'ny vidiny kely indrindra.
Mampiroborobo ny marketing amin'ny atiny.
Mampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika.
Manamarina ny marikao.
Mampitombo ny varotra.
Manome anao fahitana tsara ho an'ny mpihaino.
Manatsara ny tsy fivadihan'ny marika.
Mahaliana fa nampiasa ny teny i CJG marika mandritra ny infographic rehetra. Na dia betsaka aza ny angona angon-drakitra ahafahana manohana ny tombony ankapobeny amin'ny tambajotra sosialy amin'ny marika iray, dia miady hevitra aho fa ny vokany eo aminao olona lehibe kokoa. Ny haino aman-jery sosialy dia tsy vokatra na serivisy miteny anao avy amin'ny orinasa kely, fa ny olon'ny orinasa kely!
Manome fotoana fitokisana sy fifamatorana izay tsy ananan'ny marikao ny olona. Afaka mahafantatra anao ny olona, ​​matoky anao, mametraka fanontaniana aminao ary amin'ny farany hividy aminao. Mahazo tombony amin'izany rehetra izany ny marikao, mazava ho azy… fa noho ny olonao. Amin'ny fotony, dia ara-tsosialy haino aman-jery, fa tsy mpanelanelana tokana.
Tags: Marketing amin'ny CJG DigitalhubspotSary torohayfandraharahana madinikatombony amin'ny media sosialysary amin'ny haino aman-jery sosialy